Miriam wui wɔ Kades (1)
Mose de poma bɔɔ ɔbotan mu; ɔyɛɛ bɔne (2-13)
Edomfo amma Israelfo amfa wɔn asaase so (14-21)
Aaron wui (22-29)
20 Bosome a edi kan no mu no, Israel asafo no nyinaa baa Sina sare so, na ɔman no tenaa Kades.+ Ɛhɔ na Miriam+ wui ma wosiee no. 2 Ná nsu nni hɔ a asafo no bɛnom,+ enti wɔboaa wɔn ano kɔɔ Mose ne Aaron so. 3 Na ɔman no ne Mose hamee,+ na wɔkae sɛ: “Bere a yɛn nuanom wuwui wɔ Yehowa anim no, sɛ yɛn nso yewuwui bi mpo a, anka eye! 4 Adɛn nti na mode Yehowa asafo aba sare yi so sɛ yɛne yɛn nyɛmmoa mmewuwu wɔ ha?+ 5 Na adɛn nti na moayi yɛn afi Egypt aba asaase bɔne yi so?+ Ɛha nyɛ baabi a yebetumi adua aba biara; borɔdɔma oo, bobe oo, granate akutu* oo, wudua wɔ ha a ɛrenyɛ yiye. Na nsu biara nso nni ha a yɛbɛnom.”+ 6 Ɛnna Mose ne Aaron fii asafo no anim baa ahyiae ntamadan no ano, na wɔde wɔn anim butubutuw fam. Na Yehowa anuonyam fii ase daa adi ma wohui.+ 7 Ɛnna Yehowa ka kyerɛɛ Mose sɛ: 8 “Fa poma no, na wo ne wo nua Aaron mfrɛ ɔman no nhyia. Monkasa nkyerɛ ɔbotan no wɔ wɔn anim na nsu mfi mu mmra. Afei momfa nsu a ebefi ɔbotan no mu aba no mma asafo no ne wɔn nyɛmmoa nnom.”+ 9 Enti Mose faa poma no fii Yehowa anim+ sɛnea Ɔka kyerɛɛ no no. 10 Ɛnna Mose ne Aaron frɛɛ asafo no nyinaa baa ɔbotan no anim, na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Muntie, mo atuatewfo! Yɛmma nsu mfi ɔbotan yi mu mma mo anaa?”+ 11 Ɛnna Mose maa ne nsa so, na ɔde ne poma no bɔɔ ɔbotan no mprenu, na nsu pii fii mu bae, na asafo no ne wɔn nyɛmmoa fii ase nomee.+ 12 Akyiri yi, Yehowa ka kyerɛɛ Mose ne Aaron sɛ: “Moannye me anni, na moanni me ni wɔ Israelfo anim amma wɔanhu sɛ meyɛ kronkron. Ɛno nti, moremfa asafo yi nkɔ asaase a mede bɛma wɔn no so.”+ 13 Eyi ne Meriba* nsu no;+ ɛhɔ na Israelfo ne Yehowa hamee, na ɔma wohui sɛ ɔyɛ kronkron. 14 Afei Mose somaa nnipa fii Kades kɔɔ Edom hene nkyɛn kɔka kyerɛɛ no sɛ:+ “Nea wo nua Israel+ reka ni, ‘Wo ara wunim amanehunu a yɛafa mu nyinaa. 15 Yɛn agyanom tu kɔɔ Egypt+ na yɛtenaa Egypt mfe* pii,+ na Egyptfo no teetee yɛne yɛn agyanom.+ 16 Ewiee ase no, yesu frɛɛ Yehowa,+ na otiee yɛn, na ɔsomaa ɔbɔfo+ beyii yɛn fii Egypt, ɛnna seesei yɛabedu Kades kurow a ɛwɔ wo hye so yi. 17 Yɛpa wo kyɛw, ma yentwam mfa w’asaase so. Yɛremfa afuw anaa bobefuw* biara mu, na yɛrennom abura biara mu nsu. Yɛbɛfa Ɔhene Kwan no so, na yɛremman nkɔ nifa anaa benkum kosi sɛ yebetwam w’asaase so.’”+ 18 Nanso Edom ka kyerɛɛ no sɛ: “Mmɛfa yɛn asaase so. Sɛ wobɛfa ha a, mede sekan bepue aba wo so.” 19 Ɛnna Israelfo no ka kyerɛɛ no sɛ: “Ɔkwantempɔn no so na yɛbɛfa akɔ, na sɛ yɛne yɛn nyɛmmoa nom wo nsu a, yebetua ka.+ Nea yɛresrɛ ara ne baabi a yɛde yɛn nan betiatia atwam.”+ 20 Nanso osii so kae sɛ: “Mmɛfa ha.”+ Na Edom de nnipa bebree ne asraafo a wɔn ho yɛ den* pue kɔɔ wɔn so. 21 Enti Edom amma Israel amfa n’asaase so, enti Israel dan fii ne ho kɔe.+ 22 Na Israel man no, asafo no nyinaa, tu fii Kades, na wɔbaa Hor Bepɔw ho.+ 23 Ɛnna Yehowa ka kyerɛɛ Mose ne Aaron wɔ Hor Bepɔw ho wɔ Edom hye so sɛ: 24 “Wɔde Aaron bɛkɔ akɔka n’agyanom ho.*+ Ɔrenkɔ asaase a mede bɛma Israelfo no so, efisɛ mo baanu, moyɛɛ asoɔden wɔ m’ahyɛde a ɛfa Meriba nsu ho no ho.+ 25 Fa Aaron ne ne ba Eleasar, na wo ne wɔn mforo mmra Hor Bepɔw so. 26 Na yi Aaron ntaade no+ fa hyɛ ne ba Eleasar;+ na Aaron bewu wɔ hɔ.”* 27 Enti Mose yɛɛ nea Yehowa kae no pɛpɛɛpɛ, na wɔforo kɔɔ Hor Bepɔw so wɔ asafo no nyinaa anim. 28 Na Mose yii Aaron ntaade no, na ɔde hyɛɛ ne ba Eleasar. Owiei no, Aaron wui wɔ bepɔw no apampam.+ Ɛnna Mose ne Eleasar sian fii bepɔw no so bae. 29 Bere a asafo no nyinaa hui sɛ Aaron awu no, Israelfo* nyinaa suu Aaron nnafua 30.+
^ Ɛkyerɛ, “Ɔham.”
^ Nt., “basa a ɛyɛ den.”
^ Nt., “wɔbɛboaboa n’ano na wawu wɔ hɔ.”